ရေမွန်ကွယ်လွန်ခြင်း(၁)နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် ရေမွန်ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်ရှေ့ချပြခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် - Cele Gabar
ရေမွန်ကွယ်လွန်ခြင်း(၁)နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် ရေမွန်ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်ရှေ့ချပြခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
By ChilliPosted on June 23, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ် မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ မကြာသေးခင်အချိန်က သူ့ရဲ့အနုပညာခြေလှမ်းသစ်အနေနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသီချင်းလေးကတော့ မထင်မှတ်လောက်အောင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ ဇွန်လ (၂၃)ရက်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်သီချင်းလေးထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ ကွယ်လွန်သွားတာ ဒီနေ့မှာ (၁)နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်ရေမွန်ရေးသားပြီး ရေမွန့်ဆီကနေ သင်ဇာက သီချင်းလေးကိုဝယ်ယူထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ သီချင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒီသီချင်းလေးကို ကွယ်လွန်သွားသူ တေးရေး တေးဆို သူငယ်ချင်းတွတ်ပီ (ခ) Raymond ဆီက 2013 လောက်ကဝယ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီသီချင်းကို တွတ်ပီက သူ့အမေဆိုဖို့အတွက်ရေးထားပေးတာဆိုပြီးဖွင့်ပြတယ်။
ဖွင့်ပြပြချင်းမှာပဲအရမ်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်းရယ် ငါအရမ်းကြိုက်လို့ ငါ့ပြန်ရောင်းပါဆိုပြီး အတင်းဝယ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပေမဲ့ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြားထဲမှာလဲ မအားဘဲ သီချင်းဆိုတဲ့ဘက်ကို အချိန်အပြည့်အဝမပေးနိုင်ခဲ့လို့ သီချင်းသွင်းတဲ့အဆင့်မရောက်ပဲ တီချယ်ခင်မြတ်မွန်နဲ့သီချင်း ကျင့်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပျက်လိုက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွတ်ပီသာဆုံးသွားတယ် သီချင်းမသွင်းဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တီချယ်ကလဲ သမီးဆိုချင်ဆိုပါ သမီးဆိုပြီးမှတီချယ်ပြန်ဆိုမယ်ဆိုပြီးသေချာကျင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ အချိန်ပေးပြီးမဆိုဖြစ်ခဲ့လို့ တီချယ့်ကိုလဲ အရမ်းအားနာမိပါတယ်။ တွတ်ပီရှိတုန်းက မဆိုခဲ့မိလို့လဲနောင်တရလို့မဆုံးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လဲ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတခုကျန်ခဲ့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး တီချယ်ဆီဆက်သွယ် သီချင်းလေးကိုပြန်ထပ်ဝယ်ပြီး တွတ်ပီ ၁ နှစ်ပြည့်လေးမှာ အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တီချယ်ကိုလဲ surprise လုပ်ရင်း . . . . . ” ဆိုကာ ဒီနေ့မှာ ကွယ်လွန်ခြင်း (၁)နှစ်ပြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းရေမွန်ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတခြင်း အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို ပရိသတ်ရှေ့ချပြခဲ့ကြောင်းရေးသားမျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ သီချင်းလေးကို နားဆင်လို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ေရမြန္ကြယ္လြန္ျခင္း(၁)ႏွစ္ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ေရမြန္ေရးသားေပးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးကို ပရိသတ္ေရွ႕ခ်ျပခဲ့တဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္လ္ မင္းသမီးေခ်ာေလးတစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဇာကေတာ့ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္က သူ႔ရဲ႕အႏုပညာေျခလွမ္းသစ္အေနနဲ႔ သီခ်င္းေတြကို သီဆိုခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ပထမဆုံးသီခ်င္းေလးကေတာ့ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီေန႔ ဇြန္လ (၂၃)ရက္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဒုတိယေျမာက္သီခ်င္းေလးထြက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းေလးကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားတာ ဒီေန႔မွာ (၁)ႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ေရမြန္ေရးသားၿပီး ေရမြန႔္ဆီကေန သင္ဇာက သီခ်င္းေလးကိုဝယ္ယူထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဇာကေတာ့ သီခ်င္းေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ဒီသီခ်င္းေလးကို ကြယ္လြန္သြားသူ ေတးေရး ေတးဆို သူငယ္ခ်င္းတြတ္ပီ (ခ) Raymond ဆီက 2013 ေလာက္ကဝယ္ထားခဲ့တာပါ။ ဒီသီခ်င္းကို တြတ္ပီက သူ႔အေမဆိုဖို႔အတြက္ေရးထားေပးတာဆိုၿပီးဖြင့္ျပတယ္။
ဖြင့္ျပျပခ်င္းမွာပဲအရမ္းႀကိဳက္လို႔ သူငယ္ခ်င္းရယ္ ငါအရမ္းႀကိဳက္လို႔ ငါ့ျပန္ေရာင္းပါဆိုၿပီး အတင္းဝယ္ခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးျဖစ္ေပမဲ့ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၾကားထဲမွာလဲ မအားဘဲ သီခ်င္းဆိုတဲ့ဘက္ကို အခ်ိန္အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ သီခ်င္းသြင္းတဲ့အဆင့္မေရာက္ပဲ တီခ်ယ္ခင္ျမတ္မြန္နဲ႔သီခ်င္း က်င့္ျဖစ္လိုက္ျပန္ပ်က္လိုက္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတြတ္ပီသာဆုံးသြားတယ္ သီခ်င္းမသြင္းျဖစ္ခဲ့ဘူး။ တီခ်ယ္ကလဲ သမီးဆိုခ်င္ဆိုပါ သမီးဆိုၿပီးမွတီခ်ယ္ျပန္ဆိုမယ္ဆိုၿပီးေသခ်ာက်င့္ေပးခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိန္ေပးၿပီးမဆိုျဖစ္ခဲ့လို႔ တီခ်ယ့္ကိုလဲ အရမ္းအားနာမိပါတယ္။ တြတ္ပီရွိတုန္းက မဆိုခဲ့မိလို႔လဲေနာင္တရလို႔မဆုံးပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လဲ သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမွတ္တရတခုက်န္ခဲ့ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ဒါကိုျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး တီခ်ယ္ဆီဆက္သြယ္ သီခ်င္းေလးကိုျပန္ထပ္ဝယ္ၿပီး တြတ္ပီ ၁ ႏွစ္ျပည့္ေလးမွာ အမွတ္တရျဖစ္သြားေအာင္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ တီခ်ယ္ကိုလဲ surprise လုပ္ရင္း . . . . . ” ဆိုကာ ဒီေန႔မွာ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ျပည့္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေရမြန္ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတျခင္း အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ဒီသီခ်င္းေလးကို ပရိသတ္ေရွ႕ခ်ျပခဲ့ေၾကာင္းေရးသားမွ်ေဝထားခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ သီခ်င္းေလးကို နားဆင္လို႔ရေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ” ကျော်ထွဋ်ဆွေက Surprise လုပ်ကာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုမှုကို မျက်ရည်ကျလောက်တဲ့ထိအံ့သြပျော်ရွှင်ကာ လက်ခံခဲ့တဲ့ နန်းသူဇာ”
Next post ရတနာပုံခေတ် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုအတိုင်း ဝတ်ဆင်ကာ အမိုက်စားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ